Kedu ihe mere vidiyo vidiyo ji dị mkpa na ụdị 5 nke vidiyo I Kwesịrị Ime | Martech Zone
2015 bụ afọ ndekọ-agbasa maka vidiyo vidiyo, na nlele vidiyo elu 42% site na 2014. Otú ọ dị, nke ahụ abụghị akụkọ ahụ dum. 45% nke vidiyo vidiyo niile mere na a ngwaọrụ mkpanaaka. N'ezie, na nkeji iri na ise nke 2015, Echiche vidiyo vidiyo na-eto 6 ugboro karịa vidiyo vidiyo desktọọpụ. Nke a na data ndị ọzọ enyere na Invodo's 2015 Product Video Benchmarks Report nwere niile ziri ezi marketers kwesịrị imejuputa atumatu vidiyo… ozugbo.
Budata Invodo's 2015 Product Video Benchmarks Report
Anyị na ndị ahịa anyị niile na-arụkọ ọrụ iji hụ na atụmatụ ọdịnaya ha gụnyere:
Nkọwa vidiyo - ịkọwapụta nsogbu dị mgbagwoju anya nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha na-enyere aka, na-enye nghọta ka mma, nhazi, itinye aka na ntụgharị.
Njegharị Ngwaahịa - njegharị nke atụmatụ ngwaahịa ma ọ bụ usoro nke ụlọ ọrụ gị nwere ike inye aka.
nleba - ezughi iji dozie ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, ị kwesịrị ịnwe vidiyo vidiyo nke ndị ahịa na ezigbo ndị ahịa na-ekwupụta nsonaazụ ha nwetara.
Echiche Echiche - inye vidiyo nke na-enyere ndị ahịa gị aka ị nweta ihe ịga nke ọma n’ime ụlọ ọrụ ha ma ọ bụ ngwaahịa gị ma ọ bụ ọrụ gị ga-abawanye uru ị bara na ha.
Esi Vidiyo - ọtụtụ ndị ahịa ga-achọ izere oku ekwentị na ihuenyo iji mụta otu esi eme ihe. Nye ọbá akwụkwọ nke vidiyo vidiyo nwere ike inyere ndị ahịa gị aka idozi nsogbu ngwa ngwa ma bulie ojiji nke ngwaahịa gị.
Nke a bụ Invodo's Infographic, Ngwaahịa vidiyo na mgbawa mkpanaka: 2015 Product Video Benchmarks Recap.
Tags: invodovideo mkpanakamobile video ibuvidiyo vidiyoihe nlere vidiyo nke ngwaahịavideo ibuinfographic vidiyoọnụ ọgụgụ vidiyo